Sarri oo ka hadlay fursada uu kaga qeyb gali karo N’Golo Kanté kulanka Arsenal ee finalka Europa League – Gool FM
Sarri oo ka hadlay fursada uu kaga qeyb gali karo N’Golo Kanté kulanka Arsenal ee finalka Europa League
(London) 28 Maajo 2019. Tababaraha kooxda Chelsea ee Maurizio Sarri ayaan wali go’aaminin fursada uu N’Golo Kanté kaga qeyb galayo kulanka finalka UEFA Europa League ay habeen dambe kula ciyaari doonaan Arsenal.
Maurizio Sarri ayaa cadeeyay in fursada uu xiddiga khadka dhexe ee reer France ee N’Golo Kanté uu u heysto ka qeyb galka kulanka finalka Europa League ee habeen dambe ay tahay 50% oo kaliya.
Kooxaha reer London ayaa habeen dambe Arbacada ku balansan inay ku wada ciyaaraan finalka UEFA Europa League magaalada Baku ee caasimada dalka Azerbaijan.
N’Golo Kanté oo ka mid ah xiddigaha khadka dhexe ee ugu fiican aduunka, ayaa la dhibtoonaya dhaawac ka soo gaaray dhanka jilibka, taasoo ka dhigeysa in la shaki galiyo ka qeyb galkiisa kulanka habeen dambe ee Gunners.
Sarri ayaa shirka jaraa’id uu kasoo mooqday kahor kulanka habeen dambe ee finalka UEFA Europa League ayaa wuxuu ka hadlay xaalada N’Golo Kanté wuuuna yiri:
“Dhaawaca N’Golo Kanté ma ahan mid xoogan, laakiin dhibaatada jirta ayaa ah mid wakhtiga ku xiran, waxaan isku dayeynaa inaan dib u soo celino”.
“Waxaan isku dayi doonaa ilaa iyo daqiiqada ugu dambeysa ee xilligan xaadirka ah, fursada uu kaga qeyb galayo kulanka finalka UEFA Europa League ee habeen dambe ayaa ah 50%”.
“Waxaan isku dayayaa inaan dib u helo, waxaan markale isku dayi doonaa bari subax”.
“Ku guuleysiga koobka Europa League wuxuu xili ciyaareedka Chelsea ka dhigi doonaa mid gaar ah” - Maurizio Sarri
“Waan ku faanayaa xirashada maaliyada kooxda Liverpool” - Virgil van Dijk